မန္တလေးမှာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကို ကာကွယ်နေကြတဲ့ ဆန္ဒပြ ပြည်သူများ။ (ဓာတ်ပုံ-ထက်အောင်ခန့်/ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁)
တနသ်ာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့မှာ မနေ့က ည ၉ နာရီဝန်းကျင်လောက်က လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေက ရပ်ကွက်တွေထဲထိကို ဝင်ရောက်ပြီး ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် နှစ်ဦးကျည်ထိမှန်ခဲ့ပြီး တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အရေးပေါ်လူနာတင်ကားတွေကိုပါ တားဆီးပြီး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ထားဝယ် သပိတ်စစ်ကြောင်းမှာ ပါဝင်ဆန္ဒပြနေသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုစိုင်းကိုကိုထွန်းက ပြောပါတယ်။
“မနေ့ည ၉ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ ဂမ်မော်နဲ့ ကြက်ဆားပြင်ရပ်ကွက်က သံတံတားကြီးနားမှာ ဖြစ်တာ ပစ်ခတ်မှုစဖြစ်တာကလေ။ ပစ်ခတ်မှု စဖြစ်တာက သံတံတားကြီးပေါ်မှာ ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေက ရပ်ကွက်ထဲကို ဝင်လို့မရအောင် လမ်းပိတ်ထားတာ။ သဲအိတ်တွေ ဝါးလုံးတွေနဲ့လေ။ အဲ့လိုပိတ်ထားတာကို စစ်ကားတွေ ရောက်လာပြီးတော့ စဖယ်တယ်ပေါ့။ ပိတ်ထားတာကို စဖယ်တာမှာ ရပ်ကွက်ကလူတွေ အုံပြီးတော့ ထွက်လာတာနဲ့ ပစ်ခတ်မှုက စဖြစ်တယ်။ ပစ်ခတ်မှုက ၂ နာရီနီးပါးလောက်ကြာတယ် တောက်လျှောက်ကြီး၊ တရစပ် ရပ်ကွက်တွေထဲထိဝင်ပြီး ကျည်အစစ်တွေနဲ့ရော၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေနဲ့ရော တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်တာ၊ လူတစ်ယောက်ကျည်ထိပြီးသေသွားတယ်၊ ကြက်ဆားပြင်ရပ်ကွက်ကပဲ အဲ့ညမှာပဲဆုံးသွားတယ်။. ဆုံးသွားတဲ့သူက ကျည်ထိပြီးတော့ အရေးပေါ်ကားတွေတောက်လျှောက် လာတဲ့လမ်းမှာ တားခံရတယ်။ ဖမ်းခံရတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာသွားတယ်။ ကျည်က ဘယ်ဖက်လက်မောင်းကနေပြီးတော့ ဖောက်ဝင်သွားတာ ဂျိုင်းကြားဖက်ကို။”
ဒီကနေ့ မုံရွာမှာလည်း ဆန္ဒပြမှုတွေ ဆက်ရှိနေပါတယ်။ ဒီနေ့ မုံရွာမြို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ထဲကို လူများနေလို့ ဆိုပြီး ဝင်ရောက် ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ သူတွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေ၊ ဖုန်းတွေကို စစ်ဆေးတာမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ အဲ့ဒီဆိုင်ထဲမှာရှိနေခဲ့သူ တစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။
“ဒီနေ့ အဲ့ဒီ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတုန်း ရဲတွေ အများကြီးပဲ ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာတော့ ဆိုင်ထဲက လူတွေကလည်း ထွက်ပြေးကြတာပေါ့။ မပြေးနိုင်တဲ့ သူတွေကတော့ ကျန်ခဲ့တယ်။ မပြေးတဲ့သူ တော်တော်များများတော့ အဖမ်းခံရတယ်။ လွတ်လာတဲ့သူတော့ နည်းတယ်ဗျ။ အဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က အမြဲတမ်းလိုလို လူများတယ်။ လူငယ်တွေထိုင်တာ များတော့ကျ လူများတယ်ဆိုတော့ သူတို့က အဲ့တာကို အသခ်ါဖြစ်တာပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ ဝင်စီးတာပေါ့။ သူတို့က အဲ့မှာ ဝင်လာကတည်းက ပြောပါတယ်၊ ဒီဆိုင်မှာ အဲ့လို လူများနေတာကိုက မသခ်ါစရာဖြစ်လို့မို့ လာကြည့်တာပေါ့၊ အဲ့တော့ လူတွေက ထွက်ပြေးကြတော့ ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေကို မရရအောင်လိုက်ဖမ်းတာပေါ့။ ၂၀ ကျော်လောက်တော့ အချုပ်ကားပေါ်ဖမ်းသွားတယ်ဗျ။”
ပဲခူးမှာလည်း ဒီကနေ့ သပိတ်စစ်ကြောင်းကို လက်နက်ကိုင်တွေက ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲခဲ့ပေမယ့် ထိခိုက်သူနှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ မရှိခဲ့ဘူးလို့ ပဲခူး ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
“ဖြိုခွဲတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ မော်ဂံ ၁၈ ရပ်ကွက်ဖက်မနက်က ၁၀ နာရီခွဲလောက်က လူစုခွဲရင်းနဲ့ ပစ်တယ်။ ဒဏ်ရာရတာတွေတော့ မရှိဘူး။ မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ ပစ်တာရှိတယ်။ အပေါ်ထောင်ပစ်တာတွေဘာတွေရှိတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲတွေထိ လိုက်ပြီးတော့ ဖြိုခွဲတာဗျ သပိတ်ကိုလေ။”
မန္တလေးမှာလည်း လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေလုပ်နေပေမယ့် ဒီကနေ့မှာ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ညနေပိုင်းမှာတော့ မန္တလေး မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်က ဆန္ဒပြမှုကို ဖြိုခွဲတဲ့အတွက် ထွက်ပြေးသူတွေကို တိုက်ခန်းတွေထဲထိ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲမှုတွေကြောင့် ဆန္ဒပြသူတွေက မြို့နယ်တစ်ချို့မှာ မနက်အာရုံတက်ချိန် ဆန္ဒပြတာ၊ ပြင်ဦးလွင်၊ ညောင်ရွေနှင့် ရန်ကုန်က နေရာတစ်ချို့မှာ ကြွေးကြော်သံတွေကို လမ်းမပေါ်ချထားပြီး လူမဲ့သပိတ်တွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာမှာ စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေ နေ့စဉ်ရှိနေသလို ဆန္ဒပြသူတွေကို ဖြိုခွဲမှုတွေကလည်း နေ့စဉ်ရှိနေပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေက ဆန္ဒပြအုပ်စုတွေကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်း သေဆုံးသူတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မြင့်တက်နေပေမယ့် အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ ဆက်လက်အရှိန်ကောင်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
တနသျာရီတိုငျး ထားဝယျမွို့မှာ မနကေ့ ည ၉ နာရီဝနျးကငျြလောကျက လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့တှကေ ရပျကှကျတှထေဲထိကို ဝငျရောကျပွီး ပဈခတျမှုတှလေုပျခဲ့ပါတယျ။ လကျနကျကိုငျတှရေဲ့ ပဈခတျမှုကွောငျ့ နှဈဦးကညျြထိမှနျခဲ့ပွီး တဈဦးသဆေုံးခဲ့ပါတယျ။ အရေးပျေါလူနာတငျကားတှကေိုပါ တားဆီးပွီး ဖမျးဆီးစဈဆေးတာတှလေုပျခဲ့တယျလို့ ထားဝယျ သပိတျစဈကွောငျးမှာ ပါဝငျဆန်ဒပွနသေူတဈဦးဖွဈတဲ့ ကိုစိုငျးကိုကိုထှနျးက ပွောပါတယျ။
“မနညေ့ ၉ နာရီဝနျးကငျြလောကျမှာ ဂမျမျောနဲ့ ကွကျဆားပွငျရပျကှကျက သံတံတားကွီးနားမှာ ဖွဈတာ ပဈခတျမှုစဖွဈတာကလေ။ ပဈခတျမှု စဖွဈတာက သံတံတားကွီးပျေါမှာ ရပျကှကျနပွေညျသူတှကေ ရပျကှကျထဲကို ဝငျလို့မရအောငျ လမျးပိတျထားတာ။ သဲအိတျတှေ ဝါးလုံးတှနေဲ့လေ။ အဲ့လိုပိတျထားတာကို စဈကားတှေ ရောကျလာပွီးတော့ စဖယျတယျပေါ့။ ပိတျထားတာကို စဖယျတာမှာ ရပျကှကျကလူတှေ အုံပွီးတော့ ထှကျလာတာနဲ့ ပဈခတျမှုက စဖွဈတယျ။ ပဈခတျမှုက ၂ နာရီနီးပါးလောကျကွာတယျ တောကျလြှောကျကွီး၊ တရစပျ ရပျကှကျတှထေဲထိဝငျပွီး ကညျြအစဈတှနေဲ့ရော၊ မကျြရညျယိုဗုံးတှနေဲ့ရော တောကျလြှောကျပဈခတျတာ၊ လူတဈယောကျကညျြထိပွီးသသှေားတယျ၊ ကွကျဆားပွငျရပျကှကျကပဲ အဲ့ညမှာပဲဆုံးသှားတယျ။. ဆုံးသှားတဲ့သူက ကညျြထိပွီးတော့ အရေးပျေါကားတှတေောကျလြှောကျ လာတဲ့လမျးမှာ တားခံရတယျ။ ဖမျးခံရတယျ။ အဲ့ဒါနဲ့ မိနဈ ၃၀ လောကျကွာသှားတယျ။ ကညျြက ဘယျဖကျလကျမောငျးကနပွေီးတော့ ဖောကျဝငျသှားတာ ဂြိုငျးကွားဖကျကို။”
ဒီကနေ့ မုံရှာမှာလညျး ဆန်ဒပွမှုတှေ ဆကျရှိနပေါတယျ။ ဒီနေ့ မုံရှာမွို့ လကျဖကျရညျဆိုငျ တဈဆိုငျထဲကို လူမြားနလေို့ ဆိုပွီး ဝငျရောကျ ရှာဖှဖေမျးဆီးတာတှလေုပျခဲ့ပါတယျ။ လကျဖကျရညျဆိုငျထဲမှာရှိတဲ့ သူတှကေို ဖမျးဆီးတာတှေ၊ ဖုနျးတှကေို စဈဆေးတာမြိုးလုပျခဲ့တယျလို့ အဲ့ဒီဆိုငျထဲမှာရှိနခေဲ့သူ တဈဦးက ပွောပွပါတယျ။
“ဒီနေ့ အဲ့ဒီ လကျဖကျရညျဆိုငျမှာ ထိုငျနတေုနျး ရဲတှေ အမြားကွီးပဲ ရောကျလာတယျ။ ရောကျလာတော့ ဆိုငျထဲက လူတှကေလညျး ထှကျပွေးကွတာပေါ့။ မပွေးနိုငျတဲ့ သူတှကေတော့ ကနျြခဲ့တယျ။ မပွေးတဲ့သူ တျောတျောမြားမြားတော့ အဖမျးခံရတယျ။ လှတျလာတဲ့သူတော့ နညျးတယျဗြ။ အဲ့လကျဖကျရညျဆိုငျက အမွဲတမျးလိုလို လူမြားတယျ။ လူငယျတှထေိုငျတာ မြားတော့ကြ လူမြားတယျဆိုတော့ သူတို့က အဲ့တာကို အသချါဖွဈတာပေါ့။ ဒါကွောငျ့မို့ ဝငျစီးတာပေါ့။ သူတို့က အဲ့မှာ ဝငျလာကတညျးက ပွောပါတယျ၊ ဒီဆိုငျမှာ အဲ့လို လူမြားနတောကိုက မသချါစရာဖွဈလို့မို့ လာကွညျ့တာပေါ့၊ အဲ့တော့ လူတှကေ ထှကျပွေးကွတော့ ထှကျပွေးတဲ့လူတှကေို မရရအောငျလိုကျဖမျးတာပေါ့။ ၂၀ ကြျောလောကျတော့ အခြုပျကားပျေါဖမျးသှားတယျဗြ။”
ပဲခူးမှာလညျး ဒီကနေ့ သပိတျစဈကွောငျးကို လကျနကျကိုငျတှကေ ပဈခတျဖွိုခှဲခဲ့ပမေယျ့ ထိခိုကျသူနှငျ့ ဖမျးဆီးခံရသူ မရှိခဲ့ဘူးလို့ ပဲခူး ဒသေခံတဈဦးက ပွောပါတယျ။
“ဖွိုခှဲတာကတော့ ကြှနျတျောတို့ မျောဂံ ၁၈ ရပျကှကျဖကျမနကျက ၁၀ နာရီခှဲလောကျက လူစုခှဲရငျးနဲ့ ပဈတယျ။ ဒဏျရာရတာတှတေော့ မရှိဘူး။ မကျြရညျယိုဗုံးနဲ့ ပဈတာရှိတယျ။ အပျေါထောငျပဈတာတှဘောတှရှေိတယျ။ ရပျကှကျထဲတှထေိ လိုကျပွီးတော့ ဖွိုခှဲတာဗြ သပိတျကိုလေ။”
မန်တလေးမှာလညျး လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့တှကေ အကွမျးဖကျဖွိုခှဲမှုတှလေုပျနပေမေယျ့ ဒီကနမှေ့ာ ပုံမှနျအတိုငျး ဆကျပွီး ဆန်ဒပွခဲ့ကွပါတယျ။ ညနပေိုငျးမှာတော့ မန်တလေး မွရညျနန်ဒာရပျကှကျက ဆန်ဒပွမှုကို ဖွိုခှဲတဲ့အတှကျ ထှကျပွေးသူတှကေို တိုကျခနျးတှထေဲထိ ဝငျရောကျဖမျးဆီးတာတှလေုပျခဲ့ပါတယျ။
လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့တှရေဲ့ အကွမျးဖကျ ပဈခတျဖွိုခှဲမှုတှကွေောငျ့ ဆန်ဒပွသူတှကေ မွို့နယျတဈခြို့မှာ မနကျအာရုံတကျခြိနျ ဆန်ဒပွတာ၊ ပွငျဦးလှငျ၊ ညောငျရှနှေငျ့ ရနျကုနျက နရောတဈခြို့မှာ ကွှေးကွျောသံတှကေို လမျးမပျေါခထြားပွီး လူမဲ့သပိတျတှေ လုပျခဲ့ကွပါတယျ။
မွနျမာမှာ စဈအာဏာရှငျ ဆနျ့ကငျြရေး ဆန်ဒပွလှုပျရှားမှုတှေ နစေ့ဉျရှိနသေလို ဆန်ဒပွသူတှကေို ဖွိုခှဲမှုတှကေလညျး နစေ့ဉျရှိနပေါတယျ။ လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့တှကေ ဆန်ဒပွအုပျစုတှကေို အကွမျးဖကျဖွိုခှဲမှုတှကွေောငျ့ နိုငျငံတဈဝနျး သဆေုံးသူတှေ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ မွငျ့တကျနပေမေယျ့ အာဏာရှငျ ဆနျ့ကငျြရေးလှုပျရှားမှုတှကေတော့ ဆကျလကျအရှိနျကောငျးနဆေဲ ဖွဈပါတယျရှငျ။